Weerar Askar lagu laayay oo ka dhacay Gobolka ay Muslimiintu dagan yihiin ee Araakaan Dalka Burma.
Thursday October 13, 2016 - 09:08:45 in Wararka by Super Admin
Afar Askari oo ka tirsanaa Ciidamada Dowladda Burma ayaa dhintay, dhowr kalena way dhaawacmeen kadib markii xoogag hubeysan oo aan heybtooda la aqoonsan ay weerar ku qaadeen Saldhig ay Ciidamadu lahaayeen oo ku yaalla degmada Biyoog-Nabeet ee gobolka
Waa sawirkii ugu horreeyay ee lagasoo qaado dagaalyahano katirsan Muslimiinta Baarma
Afar Askari oo ka tirsanaa Ciidamada Dowladda Burma ayaa dhintay, dhowr kalena way dhaawacmeen kadib markii xoogag hubeysan oo aan heybtooda la aqoonsan ay weerar ku qaadeen Saldhig ay Ciidamadu lahaayeen oo ku yaalla degmada Biyoog-Nabeet ee gobolka Araakaan ee galbeedka dalkaasi.
Wargeyska Global New Light Of Myanmar ee ku hadla afka Xukuumadda Buudeyska ayaa sheegay in tobonaan dagaal yahanno ah oo ku hubeyan hubka fudud iyo Baangado in maalintii Talaadada ee shalay ay weerar xooggan ku qaadeen degmadaasi, iyagoona iska hor imaad la galay Ciidamada Booliiska, waxaana Wargeysku uu sheegay in weerarkaas lagu dilay Afar Askari oo Booliis ah iyo ugu yaraan hal ruux oo ka tirsanaa Kooxihii weerarka soo qaaday.
Weerarkan waxa uu imaanayaa iyadoo maalintii Axadda ee todobaadkan 9 Askari oo Ciidamada Booliiska ka tirsanaa lagu dilay sil-silado weerarro ah oo Kooxo hubeysan ay ku qaadeen Saldhigyo ay Ciidamada Bileysku ku lahaayeen deegaanno kuyaalla Xuduudda uu dalka Burma la wadaago Wadanka Bangladesh.
Ciidamada Xukuumadda Buudeyska ee Burma ayaa howl-galladaas xiriirka ahaa kadib waxay weerar aargoosi ah ku qaadeen Mandiqadda ay Muslimiintu dagan yihiin ee lagu magacaabo Magandaaw ee gobolka Araakaan, waxayna halkaasi ku dileen tobonaan ruux oo Muslimiin ah, halka ay boqollaal kalena Xabsiyada u taxaabeen.
Tan iyo Sannadkii 2012-kii Dowladda Wadanka Burma ayaa cadaadis xooggan waxay ku heysaa Muslimiinta Rohongiya ee daga galbeedka dalkaasi, waxaana Kooxo Buudiyiin ah oo garab ka helaya Ciidamada Bileyska ay dileen Kumanaan Muslimiin ah, halka boqollaal kun oo kalena ay u firxadeen dhinaca dalka Bangladesh.